ဆာမိုအာ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | Oceania, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ငါဘဝ၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုစဉ်းစားလျှင် ပရဒိသု ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာနေ၊ စွန်ပလွံပင်များ၊ ကြည်လင်သောရေများ၊ သဲဖြူများ၊ ပင်လယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းများစွာရှိသောအမြဲတမ်းစိတ်ကူးယဉ်နေသည်။ ¿ဆာမိုအာ, ဖြစ်ကောင်း?
ပြည်နယ်များ၏တ ဦး တည်းမှဆာမိုအာ ပိုလီနီးရှား ပြီးတော့ဒီသဘာ ၀ ပရဒိသုအကြောင်းခင်ဗျားကြားဖူးတယ်၊ ရပ်ဂ်ဘီနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းများ။ ဒီရောဂါပျံ့နှံ့ပြီးတဲ့အခါဆာမိုအာကိုခရီးထွက်ရတာဟာအားရစရာပါပဲ။ ဒီနေ့ ဆာမိုအာနှင့်၎င်း၏ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု.
2 Samoa ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ, သူကပိုလီနီးရှားနှင့်နည်းပညာပိုင်းတွင်ရှိသောလွတ်လပ်သောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် Oceania ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမန်ဆာမိုအာနှင့်အနောက်ပိုင်းဆာမိုအာအမည်များရှိသော်လည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်းကိုသာမိုအာဟုခေါ်တွင်ပြီးလွတ်လပ်သောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် (နယူးဇီလန်) ။ ၎င်းတွင်အဓိကကျွန်းနှစ်ကျွန်းဖြစ်သည့် Sava'i နှင့် Upolu တို့ရှိသည်.
၎င်း၏ပထမဆုံးနေထိုင်သူများသည်ဖီဂျီမှလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃,၅၀၀ ခန့်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဥရောပသားများသည် ၁၈ ရာစုတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ဤနောက်ဆုံးအဆက်အသွယ်ကို ၁၉ ရာစုတွင်ဗြိတိသျှတို့လက်မှပိုမိုပြင်းထန်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရှည်လျားကိုလိုနီခေတ်ရှိခဲ့ပါတယ် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဂျာမနီနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့တွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
၁၉၆၂ အထိနယူးဇီလန်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ဒီနေ့ ကပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်, အစိုးရ၏အင်္ဂလိပ်ပုံစံအားဖြင့်မှုတ်သွင်း။ အဲဒါပါ ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည် အများအားဖြင့်နှင့်ကျွန်းနှစ်ကျွန်းစီကိုကွဲပြားသောခရိုင်များဖြင့်ခွဲထားသည်။ ဤရွေ့ကား ကျွန်းများသည်မီးတောင်ဖြစ်သည် နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်၌ရှိသမျှသောရှစ်ကျွန်းအချို့ရှိပါတယ်။ ဒီမှာရာသီဥတုသည်အပူပိုင်းဒေသဖြစ်သည် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ၂၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်နှင့်နိုဝင်ဘာလမှAprilပြီလကြားတွင်မိုးများရွာသွန်းသည်။
၃ နာရီခွဲကြာခရီးအကွာအဝေးတွင်အော့ကလန်မှဆာမိုအာကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်။ မှာ entry ကို၏လေဆိပ် Faleolo အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်Upolo ကျွန်းပေါ်ရှိမြို့တော် Apia မှ ၃၅ မိနစ်သာဖြစ်သည်။ ဤအရပ်မှသင်သည် Savai'i ကျွန်းသို့ရွက်လွှင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ပျံသန်းနိုင်သည်။ မြို့ကိုရောက်ဖို့ဘတ်စ်ကားဒါမှမဟုတ်တက္ကစီစီးလို့ရတယ်။
သငျသညျတတ်နိုင်သောကြောင့်, ကျွန်းများကိုလှည့်ပတ်သွားလာရလွယ်ကူသည် ကားတစ်စီး၊ ဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်ငှားပါ လွတ်လပ်ရေးရတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်အမြဲတမ်းသုံးနိုင်သည် အများသုံးဘတ်စ်ကားများငွေသားကိုသာလက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်တင်းကျပ်သောအချိန်ဇယားအတိုင်းသာထားခြင်း။ အဓိကကျွန်းနှစ်ကျွန်းသည်ကုန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ကူးတို့ဝန်ဆောင်မှု လူများနှင့်ကားများပုံမှန်သွားသည့်နောက်ပိုင်းတွင်သေးငယ်သောကျွန်းများကိုလှေလှော်လှေဖြင့်ရောက်ရှိစေသည်။
စကြရအောင် Upolu မှာဘာတွေတွေ့နိုင်တာလဲ။ ကျွန်း၏အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်လှပသောနေရာတစ်ခုရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျော်ကြားသည် To-Sua ဟုခေါ်သောအနက် ၃၀ မီတာနက်သောပင်လယ်ထဲတွင်မြောင်းစိမ်းလန်းစိုပြေသောအပင်များနှင့်ပင်လယ်ရှုခင်းများဝန်းရံထားသောရေကူးရန်ထူးဆန်း။ လှပသောနေရာတစ်ခု။ သင်ခုန်ဆင်းနိုင်သောသစ်သားပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်လုံးဝအေးမြသည်။ ၀ င်ခွင့်ပေးရပေမယ့်မင်းလွမ်းလို့မရဘူး
မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာနောက်တစ်ခုရှိတယ် သဘာဝရေကန် ၎င်းကိုမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်ပင်လယ်အောက်ရှိဂူမှပေါ်ပေါက်လာသည့်စမ်းချောင်းတစ်ခုဖြင့်ကျွေးမွေးသည်။ ရေသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသော်လည်းနွေးထွေးပြီးဂူသည်ကြီးလှ၏။ ဒီမှာပတ်ပတ်လည် snorkeling ထက်သာ။ ကောင်း၏အဘယ်အရာကိုမျှ။ အဲဒါအကြောင်းပါ Puil ဂူရေကန်က, ကမ်းရိုးတန်းအဝေးပြေးလမ်းလျှောက်အောက်ပါ Apia ကနေ 26 ကီလိုမီတာ။
သင်တို့သည်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ရောဘတ်လူးဝစ်စတီဗင်ဆန်ပြတိုက်၏စာရေးဆရာ ဘဏ္ဍာကိုကျွန်း။ ၎င်းသည် Apia မြို့၏အထက်တွင်ရှိပြီးဥယျာဉ်များပါသောလှပသောအိမ်တစ်လုံးဖြစ်သည်။ ဆာမိုအာကိုချစ်သောစာရေးဆရာနေထိုင်ရာအိမ်ကြီးဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်များမှတဆင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြင်များမရောက်မချင်းတက်ကြွသောကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိသောလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်၍ ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် Apia ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်ဖြစ်ကြသည် Palolo နက်ရှိုင်းသောအဏ္ဏဝါသိုက်အကာအကွယ်ပေးထားသော.ရိယာ။ သငျသညျမရောက်မှီတိုင်အောင်, သငျသညျကျောက်တန်းကိုဖြတ်ပြီး, ကမ်းခြေကနေမီတာတစ်ရာရေကူးနိုင်ပါတယ် သဘာဝငါးမွေးကန်။ သန္တာကျောက်တန်းသည်လှပသောရေအောက်ပရဒိသုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောစူပါအမျိုးမျိုးရှိသည် ပင်လယ်လိပ်များ, ငါးမန်းများနှင့်အပူပိုင်းဒေသငါး။ သငျသညျ snorkeling ပစ္စည်းကိရိယာများကိုငှားရမ်းနိုင်ပြီးစတိုးဆိုင်ငယ်သည်အစားအစာနှင့်သောက်စရာများကိုပံ့ပိုးပေးပြီးအမိုးအကာရှိသည့်ကမ်းခြေသို့သွားနိုင်သည်။
ကမ်းရိုးတန်းတွင်လည်းရှိပါတယ် Namua လို့ခေါ်တဲ့လှပသောကျွန်းလေးတစ်ကျွန်း။ Lalomanu ရွာမှ ၁၀ မိနစ်သာလှေဖြင့်သွားရန်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် သုံးရက်မြောက်နေ့ကမ်းခြေရှိတဲများ၌တစ်ညတည်းနေရန်ဖိုးသည်။ ရေသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးပင်လယ်လိပ်များရှိသည်။ ၂၀၀၉ ဆူနာမီရေလှိုင်းများသည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်နှင့်အမျှအရာအားလုံးသည်အလွန်လှပပြီးကျွန်းတစ်ဝိုက်နှင့်တောင်တန်းများပတ်လည်ရှိလမ်းလျှောက်မှုများပင်လျှင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
အကြောင်းပြောနေတာ Lalomanu ကမ်းခြေစူပါလူကြိုက်များသည်ညဘက်တွင်နေထိုင်ရန်၎င်း၏အဖြူရောင်သဲများနှင့်အပန်းဖြေစခန်းငယ်များနှင့်အခန်းများပါဝင်သည်။ အပန်းဖြေစခန်းများသည်များသောအားဖြင့်ညစဉ်ညတိုင်းရိုးရာပွဲများကျင်းပလေ့ရှိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်မိသားစုအတွက်ဖြစ်သည်။
Samoan ယဉ်ကျေးမှုကိုသိရန်သင် Fa'a Samoa တွင်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည် Apia ရှိ Samoan ယဉ်ကျေးမှုကျေးရွာ။ အခြားလှပပြီးလူကြိုက်များတဲ့ကမ်းခြေတွေကတော့ Matareva သဲသောင်ပြင် နှင့် Salamumu သဲသောင်ပြင်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အခြားအရာများစွာထဲမှသင်မိုးသစ်တောများတွင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်၊ ရေတံခွန်များ၊ ငါးများကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ Lanoto'o မီးတောင်အိုင်Fiamoe တောင်ကိုတက်
သငျသညျပိုသောမငြိမ်မသက်ပင်လယ်ဖြစ်လိုလျှင်, သင်ကတခြားနေရာကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ရှိသေး၏, ဤသည်ကိုသင်လေ့လာသင်ယူသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ, Upolu နှင့်အိမ်နီးချင်း Savai'i ၌တည်၏။ ဒီကျွန်းတစ်ကျွန်းအကြောင်း Savai'i မှာဘာလုပ်နိုင်လဲ။ ဒီမှာ, Satoalepai ရွာမှာအစိမ်းရောင်လိပ်တွေနဲ့ရေကူးနိုင်တယ် နောက်ပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိသောသုံ့ပန်း၌တည်၏။ ဤလိပ်သန့်ရှင်းရာဌာနကိုဒေသခံမိသားစုမှဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ထိုနေရာသည်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ဝင်ပေါက်အနည်းဆုံးပေးရပြီး Upolu မှသင်္ဘောဖြင့်တစ်နာရီခွဲသာသွားနိုင်သည်။
ဒီကျွန်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် Saleaula Lava Fieldအဆိုပါ Silisili တောင် မိုးသစ်တောများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည့်မီတာ ၁၉၀၀ ခန့်တွင် မနာရှေသဲသောင်ပြင်အီး, လူကြိုက်အများဆုံး, အ Cape Mulinuu, အ Pagoa ရေတံခွန်, အ Monet Matavanu နှင့်၎င်း၏လှပသောမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ, အနေဖြင့်ရေ spits သောအပေါက် Alofaaga, Tafua မီးတောင်, Peapea ဂူကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကီလိုမီတာကျော်အကွာအဝေးရှိမီးတောင်ပြွန်တစ်ခုဖြစ်သည် Mataolealel နွေ ဦးသို့မဟုတျ, Dwarfs Paia ၏ဂူ, တစ်ကီလိုမီတာခန့်ရှည်သောကြောင့်တစ်နေ့သို့မဟုတ်လူကြိုက်များသော Stone House တွင်စူးစမ်းလေ့လာသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အချို့ Samoa အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်:
ရာသီဥတုမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိုစွတ်။ ပူသည်။ နိုဝင်ဘာလမှAprilပြီလအထိမိုးရာသီရှိပြီးအမြင့်ဆုံးမိုးသည်အထွတ်အထိပ်သည်ဒီဇင်ဘာမှမတ်လကြားဖြစ်သည်။
သင်ပုလင်းရေကိုသောက်ပြီးကလေးငယ်များအနေဖြင့်အနောက်တိုင်းတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပေးသောကာကွယ်ဆေးများနှင့်အတူကာကွယ်ဆေးထိုးခံရန်လိုအပ်သည်။ ငါ CXovid 19 ကိုလည်းမကြာမီမှာယူလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းပါတယ်။
ခြင်များသည်ဤတွင် dengue၊ zika နှင့် chukungunya တို့ပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်တွန်းလှန်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုလက်ခံပေမယ့်အများကြီးရှိသည်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ် ငွေသား။ ဒေသသုံးငွေကြေးသည် Samoan log ဖြစ်သည်။
ဆာမိုအာတွင်ညနေခင်းဆုတောင်းရန်ညမထွက်ရအမိန့်ရှိသည်။ အမည်ရှိ sa ယေဘုယျအားဖြင့်ည ၆ နာရီမှ ၇ နာရီကြားဖြစ်သည်။ ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးသို့မဟုတ်အခွံတစ်ခုကမိနစ် ၂၀ ထက်မကကြာသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျေးရွာများအကြားရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်ဆူညံခြင်းမဖြစ်ရ။
ရက်ပေါင်း ၆၀ ထက်နည်းသောနေထိုင်မှုများအတွက်ဆာမိုအာတွင်ဗီဇာမလိုအပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Oceania » ဟာဝယေံအဘိဓါန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်